Abiy Axmed Oo Soomaalida Kala Hadlay Qoondada Shidaalka | Hangool News
Abiy Axmed Oo Soomaalida Kala Hadlay Qoondada Shidaalka
August 24, 2018 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews: Kulanka oo maanta ka dhacay Addis Ababa wuxuu ahaa kii ugu balaadhnaa ee uu Abiy Axmed la yeesho dadka Soomaalida ah ee u dhashay Itoobiya, tan iyo markii uu xukunka qabtay, dabayaaqadii bishii Maarso.
Waxay aad uga hadleen “dhibaatooyin ka jira deegaanka Soomaalidu degto” kuwaasoo isugu jira “kuwo dhaqaale, xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo arrimo kale”.
Waxay Abiy Axmed ka dalbadeen “in nidaamka cusub uusan ku maamulin wax loo yeeriyey ee ay xor u noqdaan masiirkooda”.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isna la hadlay dadkii uu la kulmay, isagoo ay dhinacyadiisa fadhiyeen madaxweynaha cusub ee DDSI, Mustafe Muxumad Cumar, (Mustafe Cagjar) iyo guddoomiyaha xisbiga dimoqaraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya, Axmed Shide.
Muddo 15 daqiiqo ah oo uu Abiy Axmed hadlayey, ayaa 10 daqiiqo oo ka mid ah wuxuu aad ugu dheeraaday arrinta “ceelka shidaalka”.
Wuxuu marka hore soo qaaday arrin muran badan dhalisay oo la xiriirta “5% qoondada ah”, taasoo uu sheegay in loo dhigay hadalkaas si kale, balse uu ula jeeday in taasi ay leeyihiin “dadka ka ag-dhow halka uu ceelku ku yaallo iyo dadka xoolo dhaqatada ah”.
Wuxuu kaloo ka hadlay arinta shidaalka isagoo yiri “Dahabka Oromia laga soo saaro waxaa wada manaafacaadsanaya Itoobiya oo dhan, sidoo kalena Shidaalka dhulka Soomaalida laga soo saaro Itoobiya oo dhan ayaa wada manafacaadsanaysa”.